‘कांग्रेससँग ब्रान्ड छ तर हामीले ब्रान्डिङ गर्न सकेनौं’ – Nepal Tara Nepal Tara
‘कांग्रेससँग ब्रान्ड छ तर हामीले ब्रान्डिङ गर्न सकेनौं’
नेपाल तारा3months पहिले
डा रामशरण महत नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता हुन् । प्रखर वक्ता र बौद्धिक नेताका रुपमा स्थापित महतले कांग्रेसभित्र मात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् ।महतलाई पार्टीभित्र र बाहिर पनि कांग्रेसको भावी सभापति र मुलुकको भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा हेर्ने गरिन्छ । १४ बर्षको कलिलो उमेरदेखि नै राजनीतिमा लागेका नेता डा महतको पार्टीभित्र र बाहिर पनि बेग्लै छवि र पहिचान छ। कुनै पनि गुटबन्दीमा नजोडिएका महत कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वमा स्वतन्त्र र प्रभावशाली भूमिका निर्वाह गर्दै छन्। पटकपटक अर्थमन्त्री भइसकेका महतले नै उदार अर्थतन्त्र र आर्थिक सुधारको जग बसाएका थिए।
कांग्रेसको भावी नेतृत्वका लागि संभावित र सक्षम पात्रका रुपमा हेरिएका डा. महत पार्टीको पुनरसंरचनालाई पदीय भागबन्डाको झगडाका रुपमा नबुझ्न आग्रह गर्छन् ।चुनावको कमजोर नतिजापछि नेतृत्व परिवर्तन तथा पुनरसंरचनाका लागि पार्टीभित्र बहस भइरहेका बेला डा. महतले सामूहिक नेतृत्वको प्रस्ताव अघि सारेका हुन्।
चुनावी नतिजा, कांग्रेसको आगामी भूमिका, संगठनको पुनसंरचना अभियान र वाम गठबन्धनको भविष्यलगायतका विषयमा नेपाल ताराका लागि डा. महतसँग विष्णु सुवेदीले गरेको सम्वाद।
चुनावमा प्राप्त कमजोर परिणामलाई कसरी लिनु भएको छ ?
दुईवटा ठूला दल लगायत सबै वाम मिलेपछि यो चुनावी नतिजा अपेक्षित नै थियो । चुनावी नतिजाको अंक गणित मात्र हेरेर धेरै निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन। तर गम्भीर समीक्षा गरेर अब संगठनलाई पुनरसंरचना गर्नुपर्छ, नीति र नेतृत्वमा व्यापक सुधार हुनुपर्छ। कांग्रेसीले आफूलाई सच्चाउने र कांग्रेसलाई थप सुदृढ बनाउने यो अवसर आएको छ । यसलाई उपयोग गर्नुपर्छ।
कांग्रेसप्रतिको भरोसा र आस्था नघटेको प्रमाण समानुपातिक नतिजाले दिइसकेको छ।कांग्रेसमा रहेका पात्रहरुप्रति असन्तुष्टी र गुनासो हुनसक्छ तर कांग्रेस एउटा संस्थाको रुपमा आम मतदाताको आकर्षण र आस्था घटेको छैन। समानुपातिकको नतिजा हेर्दा हाम्रो मत पहिलेभन्दा बढेको छ । त्यही बलमा अब हामीले कांग्रेसलाई नयाँ उचाइ दिनुपर्छ ।
कांग्रेसलाई सुधार तथा पुनरसंरचना अब कसरी गर्ने ?
संगठन र नेतृत्वलाई पुनरसंरचना गरेर सामूहिक नेतृत्वको मोडलमा जानुपर्छ। तल्लोतहदेखि केन्द्रसम्म पार्टीको संगठन र नेतृत्वलाई पुनरसंरचना गर्नुपर्छ । अब एकल होइन, सामूहिक नेतृत्व आवश्यक छ । यसले कांग्रेसलाई नयाँ जीवन र गति प्रदान गर्नेछ ।
ग्रामिण तहदेखि केन्द्रसम्म नै कांग्रेसको नेतृत्व र संगठन कमजोर देखिएको छ।यसलाई सुधार र पुनरजागृत गर्नुपर्छ । समन्वयकारी, सन्तुलित र प्रभावकारी नेतृत्व कांग्रेसलाई चाहिएको छ । दुई चारजना अनुहार फेरिँदैमा खासै फरक पर्दैन । अब पद्धति र प्रवृत्तिमा सुधार आवश्यक छ ।
अहिले एउटा समूहबाट नेतृत्वको राजीनामा माग भइरहेको छ नि ?
मुलुकव्यापी पराजयको अवस्थामा यस्तो आवाज र प्रतिक्रिया आउनु अस्वभाविक होइन, त्यो उहाँहरुको हक पनि हो । तर राजीनामा मात्रै समस्याको सम्पूर्ण समाधान होइन । नयाँ पुस्ता आउँदैमा चमत्कार हुने पनि होइन । पुरानो वा नयाँ भनेर विवाद गर्ने वा अल्झिने बेला यो होइन । सबै मिलेर कांग्रेसलाई गतिशील र सुदृढ बनाउनुपर्छ ।
चुनावी नतिजाको समीक्षा गर्न अहिलेसम्म कांग्रेस केन्द्रीय समिति किन बस्‍न सकेन ?
सभापतीजीले किन अहिलेसम्म कार्यसमितिको बैठक बोलाउनुभएको छैन, मलाई पनि अचम्म लागेको छ । जित्‍नेहरुले पार्टी बैठक बोलाए समीक्षा गरिसके तर हामी त झन् हार्ने पार्टी, पहिले नै बैठक बोलाएर चुनावको नोक्शानी र निराशाबारे छलफल गर्नुपथ्र्यो, मतदाता र कार्यकर्तालाई स्पष्ट भन्नुपथ्र्यो । यसमा ढिलो भइसकेको छ ।
पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक तत्काल बोलाउनुपर्ने र त्यसको लगत्तै महासमिति बैठक बोलाएर चुनावी नतिजाको समीक्षा , पार्टीको पुनरसंरचना र आगामी कार्यदिशाबारे गहन वहस र छलफल हुनुपर्छ । परिस्थितिले माग गरे विशेष महाधिवेशन पनि बोलाउनुपर्ने हुन्छ तर पहिले महासमिति बैठक डाक्नुपर्छ ।
पार्टीको नेतृत्व लिन तपाई पनि तयार हुनुहुन्छ भन्‍ने चर्चा चलेको छ नि ?
त्यसका लागि मैले आफूलाई तयार राखेको छु । तर म नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । त्यसैले सामूहिक नेतृत्वमा जानु राम्रो हुन्छ । नेतृत्वको भूमिका समन्वयकारी र सन्तुलित हुनुपर्यो‍ । पदमा को जाने भन्‍ने महत्वपूर्ण होइन । मुख्य कुरा प्रवृत्ति र पद्धतिमा सुधार हुनुपर्यो‍ अनि संगठन बलियो हुनुपर्‍यो ।
पछिल्लो समयमा पार्टी संगठन र व्यवस्थापन अत्यन्त कमजोर भएको हो ? चुनावी नतिजाले पनि त्यही संकेत गरेको छ नि ?
कमजोर भएकै हो । त्यो नतिजाले पनि देखायो । कांग्रेसभित्र व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हावी भयो। गुटबन्दी रोकिएन कार्यकर्ताहरु पनि नेतामुखी भए, जिल्ला एवं कार्यक्षेत्र नजाने र मतदातासँग नभिज्‍ने प्रवृत्तिको विकास भयो। कांग्रेसीहरु सहरमुखी भए, नेतालाई चिनेपछि गाउँ जानैपर्दैन भन्ने मान्यता हावी भयो । यस्तो हुनुमा हामी नेताहरु जिम्मेवार छौं । यसको असर पनि चुनावी नतिजामा देखियो । अब यो प्रवृत्ति, मानसिकता, संस्कारको अन्त्य हुनुपर्छ । टिकट वितरणलाई हामीले बैज्ञानिक तथा पारदर्शी बनाउन सकेनौं । त्यहाँ पनि गुटबन्दी चल्यो।
नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराए पनि त्यसको फाइदा पार्टीले लिन नसकेको बताए । सरकारको छवि राम्रो भएन। केही विवादास्पद निर्णय र कदमका कारण पार्टीको छविमा धक्का लाग्यो । आइजीपी नियुक्ति प्रकरण, राजदूत, महाअभियोग प्रकरणमा कांग्रेसले आफ्नो भूमिकालाई स्पष्ट गर्न सकेन । यी कारणले कांग्रेसलाई घाटा लाग्यो ।
चुनावी मैदानमा कांग्रेसको प्रस्तुति र तयारी किन फितलो देखियो ?
चुनावी मैदानमा कांग्रेसको प्रस्तुति र तयारी फितलो भएकै हो । चुनावको मुखमा वाम गठबन्धनसँगै जुन खालको राजनीतिक घटनाक्रमको विकास भयो, त्यो अनपेक्षित थियो । यसका लागि कांग्रेस पहिले देखि नै आन्तरिक रुपमा तयार थिएन, तर अघि बढ्नुको विकल्प पनि थिएन । त्यसैले रणनीतिक तयारी र व्यवस्थापन राम्रो हुन सकेन । हाम्रो अनुमान र अपेक्षा केन्द्रमा मिले पनि तल्लो तहसम्म यसको प्रभाव नहोला भन्ने हाम्रो सामान्य आँकलन र अपेक्षा थियो । तर त्यो भएन।
हामीले हतारमा लोकतान्त्रिक गठबन्धन गर्ने भने पनि त्यसको खासै प्रभाव देखिएन । कांग्रेससँग तालमेल गरेर मधेसमा केही उम्मेदवारलाई सजिलो भयो र उनीहरुले फाइदा पनि लिए तर कांग्रेसले कतै पनि फाइदा लिन सकेन ।
कांग्रेसको नेतृत्वमा धेरै महत्वपूर्ण काम र कदम भएका छन् । चुनावी मैदानमा किन त्यसलाई क्यास गर्न सकिएन ?
गौरवमय इतिहाससँगै प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको विरासत बोकेको कांग्रेसले राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विकास र सामाजिक रुपान्तरणका लागि थुप्रै महत्वपूर्ण कामहरु गरेको छ। तर के स्वीकार्छु भने त्यसलाई चुनावी मैदानमा हामीले ‘क्यास’ गर्न सकेनौं। कांग्रेससँग विरासत मात्र होइन, ब्रेन र ब्रान्ड सबै छ तर हामीले त्यसलाई ‘ब्रान्डिङ’ गर्न सकेनौं ।
२०६३ को राजनीतिक परिवर्तनदेखि शान्ति प्रक्रिया, नयाँ संविधानको निर्माण र संविधानको कार्यान्वयनजस्ता महत्वपूर्ण राष्ट्रिय कामहरु कांग्रेसकै नेतृत्वमा सम्पन्न भए तर त्यसको राजनीतिक जस कांग्रेसले लिन सकेन ।हामीले धेरै काम ग¥यौं तर त्यसलाई क्यास गर्न सकेनौं । मतदातासमक्ष व्यवस्थित रुपमा ती कामबारे संचार गर्न सकेनौं, हाम्रो सूचना तथा प्रचार संयन्त्र पनि सारै कमजोर भइदियो । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पनि हामी त्यति प्रभावकारी भएनौं।
उदार अर्थ व्यवस्थाको जग बसाएको कांग्रेसले त्यसको क्रेडिट पनि लिन सकेन भनिन्छ नि ?
मुलुकमा उदार अर्थ व्यवस्थाको जग बसाएर निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहित गर्ने र आर्थिक गतिविधिलाई तीव्रता दिने काम कांग्रेसले नै गरेको हो, त्यो मेरै अग्रसरतामा भएको हो। कांग्रेसको त्यही उदार अर्थ नीति र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने कदमका कारण राजनीतिक संक्रमण र अस्थिरताबीच पनि आज मुलुकको अर्थतन्त्र खस्केको छैन। यत्रो द्वन्द्व र संक्रमण हुँदा पनि तिमीहरुको अर्थतन्त्र बिग्रेको छैन भनेर यहाँ आउने विदेशीहरु छक्क पर्छन् । त्यसको आधारशिला कांग्रेसले तयार गरेको हो । २०४६ सालपछि पूर्वाधार विकासमा अभूतपूर्व कामहरु भएका छन्, ती सबै कांग्रेस अगुवाइमा भएका छन् । यातयात, सूचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, कृषि, पर्यटन सबैति हेर्नुस्, निजी क्षेत्रको सहभागिता निकै उत्साहजनक छ । यसबारेमा मतदालाई हामीले प्रभावकारी रुपमा बुझाउन सकेनौं ।
वाम गठबन्धनको सरकार बन्दा छिमेकीहरुको सम्बन्ध कस्तो होला ? कुनै असन्तुलन आउँछ कि ?
दुवै छिमेकी हाम्रा लागि महत्वपूर्ण छन् । वाम गठबन्धनको सरकार बन्दैमा छिमेकीसँगको सम्बन्ध तथा परराष्ट्र नीति असन्तुलित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । वाम गठबन्धनका नेताहरुले छिमेकीसँग सम्बन्ध तथा परराष्ट्र नीतिमा सुझबुझ देखाउनुपर्छ । यसमा उत्ताउलोपना देखाउनु हुँदैन । भारतीय प्रभाव घट्यो, नेपाल चीनको
उहाँहरु मिलेर गर्नुभयो भने त राम्रै होला । राजनीतिक स्थिरता भयो भने मुलुक र जनता सबैका लागि राम्रो हुन्छ । कांग्रेसले पनि एउटा जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छ । तर सत्ताका लागि हानथाप र झगडा सुरु गर्नुभयो भने फेरि पुरानै हालत हुन्छ ।
वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने भएपछि निजी क्षेत्रमा अलिकति अन्योल र आशंका देखिन्छ नि ?
उहाँहरुको विगतको अस्पष्ट बोली र व्यवहारका कारण यस्तो भएको हो । उदार अर्थ व्यवस्थाको लहर र निजी क्षेत्रको सामर्थ्‍यलाई उपेक्षा गरेर उहाँहरु अघि बढ्न सक्ने अवस्था छैन । तर पनि निजी क्षेत्रले वाम गठबन्धन सरकारको नीति र व्यवहार पर्खिरहेको छ, उनीहरु ढुक्क हुन सकिरहेका छैनन् । निजी क्षेत्र तथा लगानीकर्ताहरुलाई निरुत्साहन गर्ने कुनै कदम चाले वा नीति ल्याएर समृद्धिको समग्र यात्रामा त्यसको नकारात्मक असर पर्नेछ । त्यो गल्ती वाम गठबन्धनको सरकारले गर्नुहुँदैन । खर्च बढाउने तथा सस्तो लोकप्रियताका लागि वितरणमुखी बजेट बनाएर मुलुकको ढुकुटी रित्याउने काम विगतमा वाम सरकारबाट भएको छ, त्यो हुनुहुँदैन ।
राष्ट्रियसभाको निर्वाचन पहिले कि सरकार गठन भन्ने विवाद कसरी टुंगिएला ?
निर्वाचन सम्पन्न गराउने सरकारको दायित्व हो । निर्वाचनको प्रक्रिया अझै सकिएको छैन । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गर्न बाँकी नै छ, त्यो काम अहिलेकै सरकारले गर्ने हो । तर त्यसका लागि आवश्यक पर्ने अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ अड्किएको छ । अध्यादेश जारी नहुँदासम्म सरकारले निर्वाचन गराउनसक्ने कानुनी आधार छैन । राष्ट्रियसभा निर्वाचन भएपछि मात्र संसद्ले पूर्णता पाउने छ र त्यसपछि मात्र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने हो ।
प्रतिनिधिसभामा पनि ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागि राष्ट्रियसभाको निर्वाचन आवश्यक छ । निर्वाचन आयोगले पनि राष्ट्रियसभा गठन नहुँदासम्म प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको नतिजा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । राष्ट्रियसभाको निर्वाचनअघि नै सरकार बनाउने जुन कुरा एमालेले गरिरहेको छ, त्यसको संवैधानिक आधार छैन, परम्परा पनि त्यो होइन । सरकार गठन एमालेकै कारण ढिला भइरहेको छ, उसले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश रोक्न दबाब दिइरहेको छ । जति छिटो अध्यादेश जारी हुन्छ, त्यति चाँडो सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्छ । यो एमालेकै हातमा छ । कांग्रेस वाधक बनेको छैन, सत्तामा बसिरहने रहर पनि छैन । बहुमत आयो भन्दैमा एमालेले संविधान, नियम, प्रक्रिया मिचेर सत्तामा जान हतार गर्नु भएन।हामीले पनि दायित्व छोडेर सरकारबाट भाग्ने कुरा हुँदैन, विधिपूर्वक सबै कुरा हुन्छ ।
अन्त्यमा, तपाई पनि पराजित हुनुभयो । पराजित हुनुपर्ने कारणहरु केके थिए ?
चुनावमा हारजित स्वभाविक हो । मतदाताको फैसलालाई म स्वीकार्छु । दुई ठूला दल एमाले र माओवादी मिलेपछि चुनावी मैदान हाम्रा लागि चुनौतीपूर्ण थियो । विपक्षीबाट मतदाता किन्ने र व्यापारीकरण गर्ने काम भयो । त्यसैगरी चुनावको मुखमा जुन हिंसात्मक विस्फोट गराइयो, त्यसले पनि मतदाताहरुमा त्रास र भयको वातावरण पैदा भयो । मतदातालाई तर्साएर वा लोभ्याएर दुवै तरिकाले आफ्नो पक्षमा तान्ने अनेक हर्कतहरु भए।